Imvula ithatha indawo ephambili eLing "Hongkong" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imvula kwi-Wang Ling's 'Hongkong' yepeyinti yedijithali
Kule mihla idlulileyo Imvula ibingoyena mntu uphambili kule nyanga ka-Epreli apho la ntetho idumileyo ibisoloko ikunye nathi endicinga ukuba masingaphindi siyenze. Kukwimvula apho ngamanye amaxesha ndiye ndakhangela abanye abazobi abazamile ukubonakalisa ubume obufumileyo nobukhethekileyo ngala mavumba anikwa ngumhlaba okanye yitela esixekweni.
Kohn, Djukaric kunye no-Imre Toth Baye bahamba ngale migca ukusibonisa ubugcisa babo bokudlulisa loo mvula iwayo ngokungapheliyo ezinweleni zethu. U-Wang Ling naye unobuganga bokuthwala imvula Kwelo qhekeza ledijithali athe walibiza ngokuba yi "Hongkong" kwaye oko kusibuyisela emva kweso sixeko kunye nezo zingwevu ziguqulwe zaba ngabona baphambili.
Imizobo yedijithali kaLing unesiphelo esihle kwaye ngemigca ezotywe kakuhle iyasivumela ukuba singene kuloo moya ukhethekileyo owenziwe kwisixeko esinjengeHong Kong kunye nezo zinto zikho ngoku kwezi zakhiwo nakwipanorama yasezidolophini.
NguLing ngokwakhe ngubani yabelana ngendlela yakho yokusebenza kwidijithali Ukusuka kwiYouTube. Ungasondela kwisitishi sakhe ukusuka kanye apha.
Asiyi kuthelekisa iiyure zokufunda onokuzidinga ezona klasiki zisebenza kwidijithali. Umahluko omnye wokugqibela kukuba uya kuhlala une "Ulawulo + Z" ukuphelisa ukubetha okugqibela okanye ibrashi yombala. Ngelixa kungathatha iiyure ezili-1000 ukufezekisa ubuchule ngepensile okanye nge-watercolor, ukuba umntu ulandela izifundo ezifumaneka kwiYouTube, ngomzamo kunye nokuzinikezela, umntu unokufumana iziphumo ezifanelekileyo.
Ngesi sizathu kanye, umsebenzi kaLing usinceda ukuba sibonise indlela yokukhetha iibrashi ezifanelekileyo kunye nezinto ezinokwenziwa xelisa ukugqitywa komsebenzi othile ioyile kwilaphu. Idijithali, nangayiphi na imeko, kwizandla ezinezakhono ziya kuhlala zinokugqibezela okuhle njengakweli cala likaLing.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imvula kwi-Wang Ling's 'Hongkong' yepeyinti yedijithali
UMark Ferrari ucacisa kwividiyo ye-8bit ubuchule bokuzoba kwimizobo ye-retro
Umzobi ozise imisebenzi kaKlimt ebomini